RSO ကို, ဆွေမျိုးခွန်အားလှို - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
စနေနေ့, ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2021
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ RSO ကို, ဆွေမျိုးခွန်အားလှို
RSO ကို, ဆွေမျိုးခွန်အားလှို
ဇွန် 3, 2018
Wilder ရဲ့ RSO ကိုညွှန်ပြချက်ကြာလှိုပုံစံအတွက်သတင်းအချက်အလက်များတင်ဆက်.
ဆွေမျိုးခွန်အားလှို သို့မဟုတ် RSO ကို is an Oscillator version of RSI. RSI asapowerful and accurate indicator is very popular. ဒါဟာတစ်ဦးအညွှန်းကိန်းညွှန်းကိန်းဖြစ်ပြီး၏အကွာအဝေးအတွင်းကွဲပြားခြားနားသည်0သို့ 100. We used to see 70s or 30s on RSI, ထို့နောက်အသစ်တခုအနေအထားဖွင့်လှစ်ရန်ဆုံးဖြတ်. သို့သော်တစ်ဦးညွှန်ပြချက်အတိုင်း, symmetry နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်ပိုပြီးဖတ်လို့လွယ်နှင့်ပိုပြီးသင့်လျော်သည်. လှိုများသောအားဖြင့်တစ်ဦးစင်တာလိုင်းရှိ 0.0 နှင့်အလယ်ဗဟိုလိုင်းပတ်ပတ်လည်လွှဲ. RSO ကို intends to do this role. With RSO ကို everything is as the same as before on RSI, ရုံအနုတ် 50. ဤတွင် overbought နှင့် oversold ရာထူးအဖြစ်အသက် 20 အရွယ်နှင့် -20s ယခုများမှာ.
ကိုယ့်ကိုပိုပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအတွက်အရောင်ဘားကဆက်ပြောသည်. Green bars show increasing of RSO ကို and red bars show decreasing. RSO ကို သို့မဟုတ် RSI curves cannot show little changes, ရောင်စုံအရက်ဆိုင်လုပ်နိုင်နေချိန်မှာ. For example when RSO ကို is over 20, ပထမဦးဆုံးအနီဘားလမျးညှနျခပြောင်းလဲမှုထုတ်ဖော်ပြသ. သင်မြင်သည့်အတိုင်း, RSO ကို with bars is more comprehensible with justaglimpse.
သဖန်းသီး 1. RSO ကိုညွှန်ပြချက်
sequential စိမ်းလန်း / နီဘားကျနော်တို့ဦးတည်ချက်အပြောင်းအလဲကိုပိုမိုစောင့်ဆိုင်းသင့်ကြောင်းညွှန်ပြ. ရုပ်ပုံအောက်ပါပြထားသကဲ့သို့, RSO ကို is around 20 နှင့်ကိုလျော့ချဖို့စတင်သည်. ဘားသတိပေးမပါဘဲ, ကျွန်တော်တစ်ဦးတိုတောင်းသောအနေအထားဖွင့်လှစ်ရန်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းစေခြင်းငှါ. သို့သော် sequential ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်အရက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှမလုပ်ကြပါဘူးသတိပြုမိဖို့ကောင်းတစ်ဦးညွှန်ပြချက်သတိပေးချက်ဖြစ်ပါတယ်.
သဖန်းသီး 2. RSO sequential color change
RSO ကို, ဆွေမျိုးခွန်အားလှိုတစ် Metatrader ဖြစ်ပါသည်4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
RSO ကို, ဆွေမျိုးခွန်အားလှိုသာမန်မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့သောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့.
Copy RSO, Relative Strength Oscillator.mq4 to your Metatrader Directory / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
How to remove RSO, Relative Strength Oscillator.mq4 from your Metatrader4ဇယား?
ယခင်ဆောင်းပါးRogue ကို tick detector
Next ကိုဆောင်းပါးအစွမ်းသတ္တိကို Arrow